Indlela Yentuthuko - i-Eurborn Co., Ltd.
2020 unyaka onzima kakhulu. Ukuze ubuyisele emphakathini nakumakhasimende ethu, u-Eurborn uzama konke okusemandleni ukusiza wonke umuntu. Sinikele ngenqwaba yotshwala bezokwelapha namaski. Akunandaba ukuthi hlobo luni lobunzima, sizokhetha ukulwa nani sobabili.
Ku-2019, sikhipha ubuntu namasiko, saqala ukuhlinzeka ngezinhlelo zonyaka zokuhamba kubasebenzi bethu abaphambili minyaka yonke.
Ku-2018, sikhuphule isilinganiso somnyango wezentengiso futhi sayithumela e-CBD enkabeni yedolobha laseDongguan.
Ku-2017, kuzongezwa iphaseji yomoya. Ingashesha ukunamathela ekungcoleni kwezingubo, izinwele nezinwele, okunganciphisa izinkinga zokungcola okubangelwa abantu abangena nabashiya izindawo ezihlanzekile.
Ngo-2016, yonke imishini yethu iqedile ngephakheji yangempela ye-CREE LED. Ukuze kuzuzwe ikhwalithi engcono kakhulu nokusebenza okuhle kwe-LED, qeda yonke inqubo ye-SMD endlini.
Ngo-2015, singeze imishini engu-5 ye-CNC engeniswe isuka eJapane kanye nemishini eyi-6 yeSickick e-Japan.
Ngo-2013, ukuze kwenziwe ukuqoqwa kwedatha kunembe kakhudlwana futhi kufinyelele kumthamo wokugcina omkhulu, sithuthukise lonke uchungechunge lwemishini lwenza uphawu lwe- "EVERYFINE", oluzinzile nolunokwethenjelwa ekusebenzeni futhi olunamandla okulwa nokuphazamiseka.
Ngo-2012, ngenhloso yokuhlinzeka ngokuhlaziywa kwe-spectrum okuzinzile, okulula, okusheshayo nokunembile, sithathe indawo yomhloli we-spectrum wakudala sasebenzisa i-analyzer yomkhiqizo we-"EVERYFINE" ethuthukile.
Ngo-2011, ukuze kuhlangatshezwane nezinga lomhlaba wonke lokuhlola ifektri, saqala ukulungisa ulayini wokukhiqiza futhi siqhuba njalo ukuqeqeshwa komlilo kwabasebenzi.
NGO-2010, iqembu lethu lokuthengisa emhlabeni wonke laqala ukubamba iqhaza kwi-International Lighting Show.
Ngo-2008, umugqa ukukhiqizwa umnyango isikhunta kwanezelwa.